iPhone,iPad and iPod..တို့အတွက် အသုံးပြုရန် iTunes Software... | အိမ်လွမ်းသူ...
iPhone,iPad and iPod..တို့အတွက် အသုံးပြုရန် iTunes Software...
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ iPhone,iPad and iPod...ရှိသော သူငယ်ချင်းတို့အတွက် မိမိရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ ရှိသင့်တဲ့ iTunes software..လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!မသိလိုက်ရသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ပါ...!iTunes လေးကိုစက်ထဲမှာ Install လုပ်ထားလိုက်ပါ...! iPhone,iPad and iPod..နှင့်ပတ်သက်သမျှ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Application..ဖိုင်တွေကို iTunes ထဲမှအားလုံးရှာလို့ရပါတယ်...!iTunes မှနေပြီး iPhone,iPad and iPod..ထဲကို install...လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်...!သုံးရတာ အဆင်ပြေပါတယ်...!Free ပေးထားတဲ့ Software လေးပါ...!တကယ့်ကို ရှိသင့်တဲ့ Software လေးတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!
မှုရင်းလင့်ကိုလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်"ဒီနေရာလေးမှ" သွားပြီးလေ့လာလို့ ရပါတယ်...!
လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
No Response to "iPhone,iPad and iPod..တို့အတွက် အသုံးပြုရန် iTunes Software..."